Ko Khit, Author at Khitamyin - Page5of 132
အာဆီယံအထူးသံတမန် ခရီးစဉ်ပျက်တာ ဘာကြောင့်လဲ..?
အာဆီယံအထူးသံတမန် ခရီးစဉ်ပျက်တာ ဘာကြောင့်လဲ? နိုင်ငံရေးသိက္ခာမရှိတဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ ဗလောင်းဗလဲ နိုင်မှုတွေကြောင့် အာဆီယံအထူးသံတမန်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ထားပြီးမှ ဖျက်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးရှင် တစ်ဦးက သုံးသပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးသံတမန်အီရာဝန် ယူဆွတ်ဟာ…
စစ်ကောင်စီနှင့် နိုင်ငံတကာ စစ် သံအရာရှိများ အရေးကြီး အစည်းဝေးလုပ်နေ နေပြည်တော်ရှိ စစ်ရုံးနယ်မြေ (Military Zone) ရှိ အဆောက်အဦတစ်ခုတွင် ရုရှား စစ်သံအရာရှိ၊ အိန္ဒိယ စစ်သံအရာရှိအပါအဝင်…
သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကို ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြ နုတ်ထွက်ရန် စစ်အရာရှိကြီး ၂ ဦးက ပြောဆိုပြီး မနုတ်ထွက်လျှင် အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့၊ သမ္မတက သေလျှင်သေပါစေဟုဆိုကာ စစ်တပ်တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်လျှောခဲ့ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ…
စစ်တပ် ရင်ဆိုင်နေရသည့် မကြုံစဖူး ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် လွှမ်းမိုးမှု ကျဆုံးခန်း စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်က အာဏာသိမ်းမှုကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ဖို့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြားအရပ်ဘက် ခေါင်းဆောင်တွေကို…
မနေ့က မတ်စိငုံသွားရတဲ့ ငပျူရဲ့ ကော်စေ့သေနတ်ကိစ္စကို ရှင်းပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
မနေ့က မတ်စိငုံသွားရတဲ့ ငပျူရဲ့ ကော်စေ့သေနတ်ကိစ္စကို ရှင်းပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို မနေ့က မတ်စိငုံသွားရတဲ့ ငပျူရဲ့ ကော်စေ့သေနတ်ကိစ္စက ဒီလိုတဲ့။ ငပျူတွေမှန်သမျှက အရက်သမား၊ ဖဲသမား၊ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိ၊…
ရာဇဝင်ထဲက မင်းဆိုး မင်းညစ်ရဲ့ မလှမပ နိဂုံး
ပုဂံခေတ် သက္ကရာဇ် ၆၁၇ ခုနှစ်ခန့်တွင် နရသီဟပတေ့မင်းနန်းတက်ပါသည်။ ထိုမင်းသည် ဖခင်လက်ထက်က မိဖုရားအရာ ထားခဲ့သော မိဖုရားစောကိုပင် ဆက်လက်ပြီး မိဖုရားမြှောက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပညာအရာတွင် သူမတူအောင် ထင်ရှားသော မိဖုရားကြီးဖြစ်သောကြောင့်…
ငါတို့က စတန်းဒက်အာမီကွလို့ လုပ်နေလို့ကတော့ ကမ္ဘာက ကြိမ်လုံးနဲ့အသေရိုက်သတ်ဖို့ လုပ်လာကြလိမ့်မယ်
ဖော့ရိုးနဲ့လား ကြိမ်လုံးနဲ့လား မင်းအောင်လိူင်ဟာ အခုနောက်ပိုင်းရေတပ်ကို အထူးပြင်ဆင်လာတာတွေ့ရပါတယ် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ကို စောင့်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်နဲ့ သူ့စိတ်တိုင်းကျ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ဆိုပြီး ထဖွဲ့ပါတယ် ရုရှရေယာဥ်တွေကိုလဲ မြန်မာ့ရေပိုင်နက်မှာဆိုက်ကပ်ခွင့် ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ကို ရုရှသွားစဥ်က ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်…
ပန်ဆယ်လိုပြောပြလာတဲ့ စစ်ဘေးဒဏ် ခံစားနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် Campaign လေးတစ်ခု ပြုလုပ်မယ့်အကြောင်း
စစ်ဘေးဒဏ် ခံစားနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် Campaign လေးတစ်ခု ပြုလုပ်မယ့်အကြောင်း ပန်ဆယ်လိုပြော စစ်ဘေးဒဏ် ခံစားနေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် စာနာမှုကို ပြသတဲ့ Campaign လေးတစ်ခု လာမယ့်(၁၃)ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။…